ကြီးကျယ် မြင့်မြတ်မှုများအတွက် မန်ယူ | ရွှေမင်းသား
Home » ဘောလုံး ရပ်ဝန်း » ကြီးကျယ် မြင့်မြတ်မှုများအတွက် မန်ယူ
ကြီးကျယ် မြင့်မြတ်မှုများအတွက် မန်ယူ
ခံစား ရေးသားသူ... ရွှေမင်းသား @ Saturday, May 16, 2009
ပရီးမီးယားလိဂ် အမှတ်ပေးချန်ပီယံ မန်ယူ အနေဖြင့် ယနေ့ ကစားသွားခဲ့သော အာဆင်နယ် နှင့်ပွဲတွင် ရမှတ် ၁ မှတ် ရယုံဖြင့် ဖလားရရှိမည်
ဖြစ်သော်လည်း အာဆင်နယ် ကို အင်တိုက်အားတိုက် ကစားသွားခဲ့သည်။သို့သော ကံကြမ္မာ အလေးသာမှုကြောင့် သရေ ရလဒ်နှင့်သာ
ကျေနပ်ခဲ့ ရပြီး (၁၈) ကြိမ်မြောက် ပရီးမီးယားလိဂ် အမှတ်ပေးဖလားကို ဆွတ်ခူးရရှိသွားခဲ့ပါသည်။ကြီးကျယ် မြင့်မြတ်သော ဆာအဲလက်(စ်)
ဖာဂူဆန် ၏ ပဲ့ကိုင်မှုအောက်တွင် ဟန်ချက်ညီညီ ကစား သွားခဲ့ကြသော မန်ယူ အသင်းသားများ၏ ကြိုးစား အားထုတ်မှု သည် အနိုင်ရလဒ်နှင့်
လက်ကျန် ၁ ပွဲသာ ကျန်ရှိတော့သော အခြေအနေတွင် ချန်ပီယံ ဖြစ်သွားခဲ့သော မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် အတွက် ချန်ပီယံ လိဂ် ဖိုင်နယ်
အတွက် အား ဖြစ်စေခဲ့ပါသည်။ ရိုးမားကွင်းတွင် ဘာစီလိုနာ နှင့်တွေ့ဆုံမည့် ချန်ပီယံလိဂ် ဖိုင်နယ်တွင် ဖလား ထပ်မံရရှိစေရန် ဆုတောင်းပေးလျက်
ကျနော်တို့ ချစ်သော မန်ယူ Glory ! Glory! Glory!....